9x25 Podcast: Apple က WWDC 2018 ကိုကြေငြာခဲ့သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
9 × 25 podcast: Apple က WWDC 2018 ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Luis Padilla | | iOS 12, NOTICIAS, podcast
ဒါဟာလုံးဝမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမတ်လမှာအဓိကကျတဲ့ Keynote ကြေညာချက်ကိုစောင့်နေတုန်း iPad အသစ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့် MacBook အသစ်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်၊ WWDC 2018 အတွက်ဖိတ်စာများကို iOS 12 အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည့် developer များအတွက်ကွန်ဖရင့်ကိုပေးခဲ့သည်။, macOS 10.14, tvOS 12 နှင့် watchOS 5. ဤရက်သတ္တပတ်ငါတို့ Podcast တခုကိုအတွက်ဒီသတင်းနှင့်အခြားသတင်းများ, သင်ကလက်လွတ်သွားမလား
သီတင်းပတ်၏သတင်းများနှင့်ပတ်သတ်သည့်သတင်းများနှင့်အမြင်များအပြင်၊ နားထောင်သူများ၏မေးခွန်းများကိုလည်းဖြေဆိုပါလိမ့်မည်။ Twitter မှာတင်သည့်ရက်သတ္တပတ်တစ်လျှောက်မှာ #podcastapple ကို hashtag လုပ်လိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံဥာဏ်တွေဖြစ်စေ၊ သံသယများ၊ သင်ခန်းစာများ၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့်လျှောက်လွှာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဤကဏ္inတွင်မည်သည့်အရာသည်ငါတို့၏ podcast ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရယူမည်နှင့်အပတ်တိုင်းပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အားကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကစတင်ခဲ့သည့်အတိုင်းယခုနှစ် Actualidad iPhone Podcast ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်မှတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်နိုင်ပြီး Podcast အဖွဲ့နှင့်အခြားကြည့်ရှုသူများနှင့်စကားပြောခြင်းမှတဆင့်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းပါ Podcast ၏တိုက်ရိုက်အသံလွှင့်သည့်အချိန်နှင့်အခြားထုတ်လွှင့်သည့်အခြားဗီဒီယိုများထည့်သွင်းသည့်အချိန်တွင်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိရန်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် iTunes မှာလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသင် Podcasts အတွက်သင်အကြိုက်ဆုံး application ကိုသုံးချင်တိုင်းနားထောင်နိုင်သည်။။ သင်အကြံပြုလိုပါတယ် iTunes တွင်စာရင်းသွင်းပါ ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်မကြာမီသူတို့ရရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ်အလိုအလျောက် download လုပ်နိုင်အောင်။ ဒီမှာကြားချင်လား။ ကောင်းပြီရုံသင်အောက်တွင်လုပ်ဖို့ကစားသမားရှိသည်။ ငါတို့လည်းရှိသည် Apple Music တွင်ဖွင့်မည့်စာရင်း podcast မှာပါတဲ့တေးဂီတ (ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့လည်းအဲဒီမှာပါ) Spotify... ) ။
subscribe RSS ကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းသတင်း » podcast »9× 25 podcast: Apple က WWDC 2018 ကိုကြေငြာခဲ့သည်
ကျွန်တော့်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ မေလမှာအမေရိကန်ကိုသွားပြီး၊ ငါ့ ipad2 ကိုအသစ်တဖန်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ သင်ဘာလုပ်မလဲ…။? အပြောင်းအလဲအတွက်အများကြီးစျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်မေလတွင် ၀ ယ်ပါ။ သို့မဟုတ်စပိန်တွင်ရှိပြီးသားအသစ်ကိုစောင့်ပါ။
ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင် Apple ၏ AirPower ကြိုးမဲ့အားသွင်းကြိုးတပ်ဆင်မည်
Unknown Senders အက်ပ်မှပေးစာများမှသတိပေးချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ